I-recipe yemastadi iresiphi kunye nokulungiselela - Indlela yokuphumelela isaladi ye-pasta
I-Lukewarm i-recipe ye-pastadi ye-pasta
Akukho nto idla ngokubanzi kwiiplate zesiJamani njengama-noodle. Zifumaneka kuzo zonke iifom ezicingwayo. Ngamanye amaxesha, phantse i-gossamer, emva kwexesha elide elingapheliyo, okanye liphela lijikeleze embizeni yamanzi ashushu. Abagcini bodwa bendawo yesebe basenaso isicatshulwa sokuthi i-noodle iyona nto ifanelekileyo kwisiphi isidlo. Ukongezelela kwiingcebiso zezithako zangaphandle, sinikeza iresiphi yesaladi yesaladi.
Mhlawumbi i-tagliatelle okanye i-farfalle-okanye ngaba kufanele ibe yinto eguqukileyo ye-spaghetti? Kwaye ngokuphindaphindiweyo, umbuzo ofanayo uvela: Indlela enempilo ngayo i-noodle? Nabani oniphethe kunye iimpendulo, kuza ekuqondeni: Ngubani ipasta ngokulinganisela, uhlala besempilweni ngakumbi, kuba pasta ngumthombo ophuphumayo wamandla.
I-salata isaladi iresiphi yesaladi yepasta
Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba ukhangele umxholo wekhalori wee-sauces. Kwaye oku kuchanekileyo apho i-salad ethandwayo isaladi idlala khona, kuba zintathu: ezihlwabisayo, ezinempilo kwaye eziphilileyo.
Kukho ezininzi zokupheka kwi-salad ye-pasta ezithengisa izitya ezininzi njengesitya sokutya.
Ngokuqinisekileyo, nakwi-barbecue kwintsimi okanye njengekhosi eyaziwayo ephambili kwixesha lokuzalwa labantwana. Ngamanye amaxesha inkunkuma yesikhombiso iyingqungquthela kunye nama-spice aseAsia, ngamanye amaxesha isaladi yiklasikhi - umzekelo ngamatamatisi othandekayo, imichilo yenkukhu, i-salmon okanye i-asparagus. Iingcamango azikho imida, kuba iigobols, amakhowe, i-rocket okanye i-avocado zifanelekile njengezitya zecala.
Nangona kunjalo, kufuneka uhlawule ingqwalasela eninzi ngaphambi kokuba isaladi isetyenziswe
Intle enhle ifumaneka kuphela xa isaladi isilungisile. Ukuba oku akunakwenzeka, umzekelo ngenxa yemithintelo yesikhathi, isaladi kufuneka iphele "ukugubungela" kwifriji okungenani iyure enye ngaphambi kokukhonza.
Ukuba ama-noodle aphekwe, kufuneka abe yi-dente, kuba ngubani "obagqwebileyo" akayi kuba neendwendwe ezonwabileyo etafuleni lakhe. Kwaye ukuqinisekisa ukuba awuyikugweba kakubi inani lama-noodle angadliweyo, kufuneka ube nalo mgaqo engqondweni: ikhulu legramu ze-noodle kwiimeko eziluhlaza zihambelana ne-200 ukuya kwi-280 amagremu weeodle eziphekiweyo.
Akaboni nje ukuba ubonakale entle, ngokwenene uyamkholisa wonke umntu. Ukwenza abantu abonwabileyo babini, umpheki okanye upheke udinga oku kulandelayo
isiqingatha sesibomvu esibomvu nesiqingatha
I-160 gram ye-broccoli
I-80 gram ye-tagliolini efanelekileyo
iipunifo ezihlanu zeoli
isiqingatha se-parsley e-plain
mahlanu amasebe e-thyme
iziqu ezintathu ze-lemon balm
amaqabunga amane amancinci
iziqu ezintathu ze-basil ezinkulu
ipofile ye juisi kunye ne
umgca wepilisi emnyama kwipilisi.
Ukulungiselela isaladi isaladi:
Iipilisi ziyabhalwa emva kwemizuzu eyisibhozo emva kokuba u-plaster, uze uhluthwe kwesikhumba uze uthathe imichilo.
Iinqwelo ziyahlanjululwa kwaye zinqunywe zibe zincinci zincinci, i-broccoli ixutywe.
Ama-noodle aphekwe ekuphelelweni kwamanzi etyuwa, izaqathe kunye ne-broccoli zibagcina inkampani imizuzu emine.
Emva koko, i-noodle ekhuhliweyo iyenyiswa ngetamatato enonciweyo.
Zonke ezi zityalo zihluthwa okanye zihlulwe ngokukhawuleza.
Ekugqibeleni, iipilisi kunye neetatayi ziyafudumala kwinqanaba elincinci leoli kwaye lixutywe phantsi kweeodle.
Kubaluleke kakhulu: I-salad ye-pasta ifika emva koko emva kokutsha kwaye ihluthe phezu kwetafile.
I-American food recipe I-American cuisine
I-recipe ye-Barbecue - inyama ye-skewers kunye ne-barbecue sauce
Recipe ipasato casserole
Ihorensi iresiphi yokugcoba
Ikhefu le-apple strudel yokubhaka
Ukupheka isonka esidliwayo ... Isonka se Recipe
I-bhotela ye-herb i-whisky ibhotela yokugcoba
Ukupheka isonka se-pumpkin isonka - iresiphi Isonka
Isonka sonke sengqolowa - isonka sesonka
I-Mexican Cuisine - I-recipe yeTaco
I-Mexican Cuisine - Inkukhu Enchilada Recipe
I-Mexican Cuisine - I-Hot Salsa Chili Recipe
I-Mexican Cuisine - I-recipe ye-apula isaladi
I-Mexican Cuisine - Recipe ikhacado salsa